Borderless A3 + Size Epson L1800 Photo Ink Tank Inkjet Printer
L1800 bụ ụwa mbụ A3 + 6-agba mbụ ink tank usoro na ngwa nbipute, na-enye gị ike na-emepụta borderless, foto mma Mbipụta na ultra ala na-agba ọsọ na-akwụ ụgwọ. Mgbe a bịara n'ịkesa elu mmetụta visuals na a buru ibu n'ọtụtụ, na L1800 bụ ihe ngwọta ị na nọ na-eche.
. Mkpụrụ nke ihe ruru 1,500 foto 4R
. Bipute ọsọ ruo 15ppm
. Akwa-agba ink karama
. Akwụkwọ ikike afọ 1 ma ọ bụ nde 9,000
Original CISS ngwa nbipute ọhụrụ 6 agba
Enweghi ink na-enweghị ihe ọhụụ n'ime
Ezi nhọrọ maka ntinye akwụkwọ
Fast Dry A3 / A4 / Roll Sublimation Akwụkwọ for Textile Lea for Mup / Cloth / Cup / Mouse Kedo akwa Bipute
Sublimation akwụkwọ, nke a na-akpan mepụtara maka elu-ọsọ inkjet digital sublimation nyefe-ebi akwụkwọ. O adabara nnukwu ọsọ inkjet obibi akwụkwọ na mgbe obibi akwụkwọ, ink kpọrọ nkụ ngwa ngwa, ọ nwere ike ịnwe ogologo ndụ nchekwa mgbe ị bipụtara ma tinye akara zuru oke ma bipụta nkọwa, ọnụego nnyefe nwere ike iru 95%. Elu àgwà isi akwụkwọ na mkpuchi na magburu onwe Ime Otu na ire ụtọ. Ọ bụ uru ndị Mfe nka, ebipụta ozugbo na-enweghị efere Ndinam usoro mkpụmkpụ, ịzọpụta oge na mgbalị; kpoo ngwa ngwa, ezigbo nguzogide curling, bipụta na-enweghị wrinkingly; edo mkpuchi, magburu onwe ya ink Realease, obere deformation.
Ọnụ ego dị ala, mpịakọta mpịakọta dị elu A3 Size Epson L1300 Photo Ink Tank Inkjet Printer
The Epson L1300 bụ ụwa mbụ 4-agba, A3 + mbụ ink tank usoro ngwa nbipute, na-eweta àjà ihe ọ ultraụ affordability ka elu àgwà A3 akwụkwọ ebi akwụkwọ na a nnukwu ụzọ.
Akwa-agba ink karama
Bipute ọsọ ruo 15ipm
Mbipụta mbipụta ruo 5760 x 1440 dpi
Akwụkwọ ikike nke afọ 2 ma ọ bụ peeji 30,000, nke ọ bụla na-ebu ụzọ
2580 2586K 2588 2589 2590 HP Mgbaze Ihe Mgbaze Mbadamba maka Nchikota nri na Mbipụta Ọgwụ
• magburu onwe anwụ ngwa ngwa na ntekwasa blies foils
• Long decap oge-ezigbo maka intermittent ebi akwụkwọ
• Oge akọrọ ngwa ngwa na-enweghị enyemaka ọkụ
• Nkọwapụta ederede dị elu
• Sme, sụọ, na mmiri na-eguzogide ọgwụ
• Ọsọ ọsọ na-agba ọsọ2
• Ogologo ịtụ anya2
Gbalịa nwa ink HP 2580 ink na:
• ntekwasa substrates dị ka nitrocellulose na acrylic ntekwasa blister foils
• Ọkara na-agbanwe ihe nkiri na-agbanwe agbanwe
Ndenye-Akọrọ Qr Code Na-abụghị Porous Media 45si 2588 2706K 2589 2580 2590 Cartridge Mgbaze Mgbaze maka Aka Jet Coding Printer
Nkwakọ ngwaahịa Code Printing
Ogwe Code Mbipụta
Pretreatment Liquid Sublimation Okpomọkụ Nyefee mkpuchi na Sublimation Ink maka T-uwe elu Cotton Fabric Mugs Ceramic Metal Wood Printing
Sublimation mkpuchi bụ Sublimation ntekwasa na owu e mere maka dijitalụ ebi akwụkwọ na-akwado iji nke pụrụ iche mepụtara ngwaahịa, isi ihe dị elu-edu ngwaahịa iji hụ na nkasi obi nke owu obi na-adị mgbe sublimation obibi, agba na agba ngwa ngwa, nyefe na-arụ ọrụ nke ọma, ụkpụrụ na siri , ogologo oge agaghị agwụ ma ọ nwere ike ịnweta mmetụta na-enweghị isi.
Ndị na-ebi akwụkwọ aka / Oline maka ndị na-ede akwụkwọ na akara na osisi, ọla, plastik, katọn
Ndị na-ebi akwụkwọ ntanetị nke Thermal Inkjet (TIJ) na-enye nhọrọ dijitalụ dị elu dị elu karịa ndị na-agagharị agagharị, valvejet na sistemu CIJ. Indị inks dịgasị iche iche dị na-eme ka ha dabara adaba maka igbe na igbe, trays, aka uwe na ngwa nkwakọ ngwaahịa plastik.
TIJ2.5 Nnukwu Inki Systems CISS tank na 1/2/4/6 Femail njikọta maka 51645A ink katrij
HP Black 4500 Bulk Tụkwasịnụ C6119A
HP 4500 HP 2510 HP 45A HP 51645A Nwa BULK NA-EBU
Ike ndọda nri nnukwu ngwọta maka nkọ, crisp ebipụta mma na uncoated substrates.